आजबाट आचारसंहिता लागु, के-के गर्न पाइदैन त ? - Everest Dainik - News from Nepal
आजबाट आचारसंहिता लागु, के-के गर्न पाइदैन त ?
२०७४, १२ माघ शुक्रबार
काठमाडाैं । माघ २४ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि आचारसंहिता आजबाट लागू भएको छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष बनाउन आचारसंहिता लागु गरिएको हो ।
विगतका निर्वाचन झै राष्ट्रियसभा निर्वाचन पनि स्वच्छ, निश्पक्ष, पारदर्शी र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि आजदेखि आचारसंहिता लागू गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
सरकार, सरकारका मन्त्री, प्रदेश र स्थानीय तह, सार्वजनिक संस्थाका कार्यालय तथा कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, निर्वाचनको काममा संलग्न कर्मचारी, राजनीतिक दल, दलका भ्रातृ संगठन, उम्मेदवार, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति, पर्यवेक्षकलाई आचारसंहिता लागू हुने छ ।
यता सरकारी र निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यामलाई समेत आचारसंहिता लागू हुने छ । राष्ट्रियसभा चुनावका लागि बुधबार भएको मनोनयन दर्तामा ८३ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभाका लागि हरेक प्रदेशबाट ८—८ जनाको दरले ५६ जना निर्वाचनबाट चुनिने र तीन जना सरकारको सिफारिसरमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
ट्याग्स: Acharsamita, Rastriyasava Nirwachan